छठ पर्व: प्रकृति पूजा : RajdhaniDaily.com
Home बिचार छठ पर्व: प्रकृति पूजा
छठ पर्व: प्रकृति पूजा
छठ पर्व कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुराको यकिन गर्न कठिन छ । सूर्य पुराणमा वर्णित कथाअनुसार कात्र्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन सुख, सौभाग्य, समृद्धि र दाम्पत्य प्रेमको निरन्तरताका लागि अत्रि ऋषिकी पत्नी सती अनुसुयाले गरेकी थिइन् । यहिबाट छठ पर्व आरम्भ भएको थियो । महाभारत पर्वमा वर्णन भएअनुसार पाँच पाण्डव पत्नी द्रौपदीले एक सय आठपटक सूर्यको मन्त्र जप गरी कात्र्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन व्रत बसेको र व्रतको प्रभावबाट पाण्डव सफल भएको मानिएको छ । मूलतः धर्म र संस्कृतिको बाहुल्यत रहेको नेपाली संस्कृतिमा अनेकन चाडपर्वको आआफ्नै विशेषता रहेको सर्वविदितै छ । हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति, कलाकौशल, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्पराबारे जति धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्यौं त्यति धेरै गहिराइभित्र पुगिन्छ र हामी विस्मित हुन्छांै ।
यसैमा नेपालको तराई क्षेत्रमा बस्ने हिन्दूले सयौं वर्षदेखि परम्परागत रूपमा कात्र्तिक शुक्लपक्ष षष्ठीका दिन छठ पर्व मनाउँदै आएका छन् । हिन्दूको महान् चाडको रूपमा मनाइने दसैं र तिहारको लगत्तैपछि हिन्दूको अर्को महŒवपूर्ण चाड छठ पर्व पनि आफ्नै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महŒव बोकेको छ । छठलाई छठी, छठीमाई, छठी परमेश्वरी, छठीदेवीको रूपमा पनि अभिव्यक्त गरिन्छ । भोजपुरी र अवधि भाषाभाषीले मनाउँदै आएको यो पर्व क्रमशः अन्य जात जाति र भाषाभाषीले पनि मनाउन थालेका छन् ।
विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो देशमा प्रत्येक दिनजसो एक न एक पर्व पर्ने नै गरेको छ । हाम्रो देशमा मनाइने जुनसुकै पर्व पनि जातजाति र मानवसँग आधारित पर्व छन् । तराईवासी हिन्दूको महान चाडको रूपमा लिइने छठ पर्वको पनि आफ्नै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महŒव रहेको छ । त्यसैगरी, छठ पर्व पनि मूलतः तराईवासीमा मैथिली, भोजपुरी र अवधि भाषाभाषीले मनाउँदै आएको महŒवपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो । खास गरिकन कार्तिक शुक्लषष्ठीका दिन मनाइने छठ पर्व हो । यो पर्वमा सूर्यको पूजा, उपासना गर्नुका साथै स्वादिष्ट परिकार विशेषगरी ठेकुवा, भुसुवा कसार आदि पारिवारिक र आफन्तजन एकै ठाउँमा बसेर खाने गरिन्छ । छठ पर्वलाई ऐतिहासिक रूपमा अवलोकन गर्दा द्वापरयुगबाट सुरुआत भएको देखिन्छ । त्यसबेला भारत वर्षका मानिसले यस पर्वलाई मनाउँदै आएको थिए । समयको गति सँगसँगै मुलुकको तराई भागमा बसोबास गर्ने प्रायः गरी हिन्दू समुदायले यो पर्वलाई मनाउँदै आएका छन् । बिस्तारै बिस्तारै यो पर्व मुलुकको काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रमा मनाउँदै आएका छन् ।
सामान्यतया मैथिली तथा भोजपुरी समुदायमा मनाइने चाड छठलाई छठी, छठीमाई, छठी परमेश्वरी, छठी देवीको रूपमा पनि अभिव्यक्त गरिन्छ
यस पर्वमा खासगरी पोखरी, नदी नाला आदि जलाशयलाई झिलिमिली पारी सिँगारिन्छ । यसको धार्मिक मान्यताअनुसार सूर्यको पहिलो प्रकाश शरीरमा परेको खण्डमा रोगव्याधि नाश हुन्छ भन्ने किंवदन्ती रहेको पाइन्छ । यो पर्वलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने वैज्ञानिक र आध्यत्मिक दुवै पक्षले भरिभराउ भएको पर्व हो । यस सूर्य देवतालाई उपासना गर्नका लागि केराको घरी, विभिन्न प्रकारका फलफूल, थरीथरी र जातजातका फूलले बेहुलीभन्दा पनि राम्रोसँग सिँगारिएको हुन्छ । यस पर्वमा माटाका भाँडाकुँडाले सजिसजाउ गर्ने चलन रहेको थियो भने आजभोलि तामा तथा पित्तलका भाँडाकुडा राख्ने चलनले गर्दा त्यति राम्रो र शोभायमान देखिँदैन ।
‘छठ’ शब्द षष्ठी शब्दको तद्भव रूप हो । षष्ठीका दिन यो पूजा भएकाले अपभं्रशमा छठीबाट छठ भएको हो । हिन्दू धर्मग्रन्थमा सूर्य भगवान्को पूजाको ठूलो महŒव छ । छठमा सूर्य भगवान्कै उपासना गरिन्छ । सूर्यलाई वैदिककालमा एउटा प्रमुख देवता मानिन्छ । ऋग्वेदमा सूर्यलाई सबै देवताको स्रोत मानिएको छ । विश्वका सबै जीवजन्तु र वनस्पति सूर्यकै तापबाट बाँचेका छन् । अथर्व वेदमा त सूर्यलाई ब्रह्माको रूपमा मानिएको छ । छठ पर्वमा सूर्यको पूजा, उपासना गर्नुका साथै स्वादिष्ट परिकार विशेषगरी ठेकुवा (एक प्रकारको स्वादिष्ट रोटी), भुसुवा कसार (एक प्रकारको स्वादिष्ट लड्डु) आदि विशेष रूपमा तयार गरी आफन्तजन मिलनमा खाइन्छ । छठलाई स्त्रीलिंगी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि यस पर्वमा सूर्यको पूजा, आराधना र उपासना गरिन्छ । पौराणिक मान्यताअनुसार सूर्यदेव (लोकभाषामा दिनानाथ) र षष्ठीदेवी (सूर्यदेवकी पत्नी)को संयुक्त पूजा, उपासना नै छठको मौलिकता हो ।
छठ पर्व कात्र्तिक शुल्क चतुर्थीदेखि सुरु हुन्छ । चतुर्थीका दिन व्रतालु महिलाले स्नान गरी शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्ने, गोबरले घरआँगन लिपपोत गरी पवित्र बनाएर दिनभरि उपवास बस्दछन् । साँझपख शुद्ध दूधमा खिर पकाई केरा, मिष्ठान्न, फलफूल इत्यादि प्रसाद चन्द्रमालाई उत्सर्ग गरी व्रतालुले आफू पनि ग्रहण गर्ने गर्दछन् । यसलाई खर्ना भनिन्छ । छठका दिन शुद्ध गहँुको पिठोबाट विभिन्न गुलिया खाद्यपदार्थ बनाउँछन् । साथै केरा, सुन्तला, ऊखु, विभिन्न जातजातका फलफूलसहित नाङ्लो वा डालोमा राखी निर्धारित जलाशय, पोखरी, नदी, ताल तलाउ आदिमा गएर स्नान गरी नयाँ वस्त्र पहिरिएर छठमाईको पूजाआजा गरी त्यहाँ मन्त्रोचारण गरेर पूजा सामाग्रीहरू राखी प्रणाम गर्दछन् ।
छठ पर्वले प्रशन्नता, सद्भाव सौहार्दता फैलाउन तथा रोग र विकृति नाश गराई सुख, शान्ति, समृद्धि प्रदान गर्ने जनविश्वास रहेको छ
त्यसपछि व्रतालुहरूले सन्ध्याकालीन सूर्यलाई अर्ध दिनका लागि जलाशयको पानीमा पसेर पश्चिम मुख फर्काएर अर्ध दिने गर्दछन् । डालोमा रहेका पूजा सामग्री सूर्यलाई अर्पण गरी अर्ध दिने गरिन्छ । सम्पूर्ण विधि सम्पन्न गरी व्रतालु पूजा सामग्री लिएर घर फर्किने गर्दछन् । कति महिला, पुरुष त त्यही रातभरि जाग्राम बसी छठ परमेश्वरीका गीत गाउने गर्दछन् । पुनः बिहानै सूर्योदयभन्दा पहिले नै उठी पूजा सामाग्रीले पूजाआजा गरी भगवान्लाई अर्पण गरी अर्घ दिने गरिन्छ । पूजा सकिएपछि त्यही प्रसाद वितरण गरिन्छ । त्यसपछि आआफ्नै घर फर्किन्छन् र व्रतालु सूर्यपुराण सुन्छन् । यसले नै छठ पर्वको सम्पूर्ण विधि समाप्त हुन्छ ।
छठ पर्वको ऐतिहासिक महŒव रहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सकिन्न । यद्यपि, छठ पर्व कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुराको यकिन गर्न कठिन छ । त्यसैगरी, आयुर्वेदमा सूर्यको महŒव ब्रह्माण्डमा ज्यादा रहेको सम्पूर्ण चराचर जगत्का निम्ति अनिवार्य चिजको रूपमा लिइएको छ । त्यसैले सूर्यलाई शक्तिको महŒवपूर्ण स्रोतको रूपमा पूरा गर्न थालियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा छठ पर्वको महिमा रोगव्याधि निको हुने विश्वास बढ्दै गएको छ । आफ्नो दुःखकष्ट र रोग निको होस् भने भाकल गरेपछि रोगमुक्त भएका कतिपय श्रद्धाजुभक्तजनको अनुभव सुन्न पाइन्छ । सुखशान्ति र धनधान्यको कामनासहित छठको व्रत बसी पूजा गरेमा मागेको वरदान पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ । हिन्दू धर्म दर्शनमा ॐकारको सम्बन्ध सूर्यसित नै दर्शाइएको र ॐकार नै सूर्र्यको आदित्य रूप भएकाले त्यसको आराधनाका लागि निर्देशित गरिएको छ । छठ पर्वले कर्मप्रतिको निष्ठामा विशेष रूपमा जोड दिएको पाइन्छ । कर्मको फल मीठो हुन्छ र मानव समुदाय साँचो मनले कर्मप्रति समर्पित हुनुपर्ने छठ पर्वको मौलिक उपदेश रहेको सबै जनमानसको विचार रहेको छ ।
छठ पर्वमा सबै जातजातिबीच साम्प्रदायिक सद्भाव वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । जनमानसमा प्रशन्नता, सद्भाव सौहार्दता फैलाउन छठ पर्वले भूमिका खेलेको र यसको प्रभावबाट सबै रोग र विकृति नाश भई सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुने मान्यता छठ पर्व मान्नेले राख्ने गरेको पाइन्छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोनासको विषेश परिस्थितिको कारणले गर्दा आआफ्नो घरमा भए पनि छठ पर्व मनाउन सकिन्छ । यसबाट हामी सबैको कल्याण हुने कोरोनाको कहर पनि छिटै हट्ने आशाको साथसाथै सबै देशवासीलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा डो-याउन सकोस् । हिंसा र विनाशको जरैदेखि अन्त्य होस् यही नै महान छठ पर्व सन्देश सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीमा शान्तिको वातावरण कायम रहन सकोस् यही शुभकामना !
रामेछापको गुम्देलको चौरी गोठबाट कर्मारिन्जी शेर्पा ल्यापटपमै रेकर्ड गरेर शेर्पा कार्यक्रम रेडियो कैरनमा पठाउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । चौरी गोठमा बसेर होस् वा कुनै...
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने तत्कालीन कदम
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले समाजका धनी, गरिब कसैलाई बाँकी राखेको छैन । तर, यसबाट सबैभन्दा बढी गरिब र बेरोजगार प्रताडित भएका छन् ।...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - May 1, 2021 0
राजनीति Dhruba Lamsal - January 13, 2021 0
भर्खरै Kumar Raut - January 7, 2021 0
वाशिङ्टन । अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्टन डीसीमा संसद तोडफोड हुँदा भएको हिंसात्मक घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले संसद बैठकमा छिर्ने...
Breaking News Dhruba Lamsal - February 18, 2020 0
जनकपुरधाम । धनुषामा बुहारीलाई जलाउन खोज्ने सासुलाई जेल चलान गरिएको छ । महोत्तरीको बलबा नगरपालिका १ हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ८ बस्ने बुहारी...
राजनीति Dhruba Lamsal - October 19, 2020 0
प्रदेश ३ Dhruba Lamsal - December 3, 2020 0
भारतमा कोभिड–१९ बाट एकै दिनमा चार हजार ५२९ जनाको मृत्यु
विदेश एजेन्सी - May 19, 2021 0
नयाँदिल्ली । कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको भारतमा विगत २४ घण्टामा थप चार हजार ५२९ जनाको मृत्यु भएको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी...